मेष: यो सोमबार घरमा प्रेम र समझदारी रहनेछ। तपाईं एक परियोजना अनुसन्धान मा काम गर्न सक्नुहुन्छ। व्यवसायीले इमानदारीका साथ काम गर्नुपर्छ । साथै अदालत र अदालतको कामबाट....
तपाईंको आजको दिन यसरी बित्दै छ थहा पाउन हेर्नुस् राशिफल
मेष: आइतबार तपाईको व्यक्तित्वमा नयाँ आकर्षण रहनेछ। आफ्नो सीप र समझको साथ, तपाईंले कार्यहरू राम्रोसँग पूरा गर्नुहुनेछ। व्यापार व्यवसायमा अचानक शुभ समाचार प्राप्त हुन सक्छ । अधिकारीहरूसामु....
मेष: शनिबार तपाईको लागि सुनौलो पल ल्याउनेछ। साथै, तपाईको कामको प्रशंसा हुन सक्छ। तितोपनलाई मिठासमा परिणत गर्ने कला आफ्नो व्यवसायको लागि सिक्नुपर्छ। भाडामा लिने व्यक्तिहरूले आफ्नो पैसा प्राप्त....
मेष: यो शुक्रबार तपाईको राम्रो प्रदर्शनले अरुलाई प्रभावित पार्नेछ। नियमित काम बाहेक अरु केहि गर्ने प्रयास गर्नुभयो भने सफलता मिल्नेछ । व्यवसायीहरुका लागि दिन निराशाजनक रहनेछ । रोजगारीका....
तपाईंको आजको दिनको भाग्य बारे थाहा पाउनुहोस
मेष: तपाईको बिहीबार मिश्रित रहनेछ। कार्यस्थलमा बिहीबार तपाईको पक्षमा केहि परिवर्तन हुन सक्छ। महिला वर्गबाट ​​लाभ मिल्नेछ। यसका साथसाथै व्यापार विस्तारको लागि मन तयार हुनेछ। अनुभवी व्यक्तिको सहयोगले कठिन....
तपाईंको आजको दिन यसरी बित्दैछ,हेर्नुस् राशिफल
मेष: बुधवार तपाईको लागि धेरै शुभ दिन छ। मनोकामना पूरा गर्न सकिनेछ । यस बुधबारको दिनमा तपाईंले राम्रो र लाभदायक परिणाम प्राप्त गर्नुहुनेछ। यसका साथसाथै साथी वा....
मेष: आजको मंगलबारको दिन खुसीसाथ सुरु हुनेछ। परिवारसँग राम्रो समय बित्नेछ। नोकरीमा राम्रो आर्थिक लाभ हुनेछ, पदोन्नतिको संकेत मिल्नेछ। यसैबीच, व्यापारीहरूको लागि नाफाको अवस्था छ। शुभ रंग :....
आज यी राशिको भाग्यको हुदैछ उदय हेर्नुस राशिफल
मेष: सोमबार भाग्यले साथ दिनेछ। काममा तपाईको प्रदर्शन राम्रो रहनेछ। तपाईमा बोल्ने कला छ जुन तपाईलाई कुनै पनि क्षेत्रमा सफलताको शिखरमा पुर्‍याउन सहयोगी साबित हुनेछ । सोमबार भाग्यले....
तपाईंको आजको दिन यसरी बित्दै छ
मेष: आइतबार तपाईको लागि धेरै राम्रो दिन छ। कुनै पनि काममा ईश्वरीय सहयोग मिल्नेछ। आफ्नो मेहनत र अथक परिश्रमको फल अवश्य प्राप्त हुनेछ। परिवारमा सोचे अनुसार सुख मिल्नेछ....
तपाईंको आजको दिन यसरी बित्दैछ ,हेर्नुस् राशिफल
मेष: आफैमा विश्वास गर्नुहोस्। ब्यापार ब्यवसायमा दाजुभाइको सहयोग पनि प्राप्त गर्न सकिनेछ । साथीभाइको सहयोगले कठिन कार्यहरू सजिलै सम्पन्न हुनेछन्। महिलाले घरायसी सामान किनमेल गर्नुपर्नेछ । बिद्यार्थीहरुले परिश्रम अनुसार....
आज यी राशिभएकाको भाग्यमा आउदै फेरबदल
मेष: शुक्रबार जीवनमा सुनौलो पल ल्याउने छ। बुद्धिमताले गरेका काम पुरा हुनेछन् । आफ्नो व्यापार बढाउन घरका सदस्यहरूसँग बसेर छलफल गर्नुहुनेछ। सफ्टवेयर कम्पनीहरूमा काम गर्नेहरूका लागि दिन राम्रो....
आज यी राशी भएकाले उच्च सतर्कता अपनाउ पर्ने नत्र यस्तो हुनेछ नोक्सान
मेष: तपाईको प्रयासले बिहीबार फल दिनेछ र तपाईको आत्मविश्वास बढ्नेछ। तपाईं नयाँ साझेदारी वा संघमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँको सामाजिक सर्कल बढ्नेछ र तपाइँ केहि महत्वपूर्ण जडानहरू....
मेष: तपाईको लागि यो समय शुभ छैन। दाजुभाइसँगको विवादले पारिवारिक जीवनमा पनि अस्थिरता ल्याउन सक्छ। प्रेम सम्बन्ध यथावत रहनेछ । लगनशील मिहिनेतका साथ वरिष्ठहरूलाई सन्तुष्ट पार्न सक्नु भयो....
तपाईंको आजको दिन कस्तो रहला? थाहा पाउन हेर्नुस् राशिफल
मेष: कानुनी मामिलामा धेरै सावधानी अपनाउनुपर्नेछ। तपाईं आफैंलाई प्रतिकूलतामा फेला पार्न सक्नुहुन्छ। घरजग्गा कारोबार तपाईंको लागि लाभदायक साबित हुन सक्छ। धार्मिक कार्यमा खर्च हुनसक्छ जसले मनमा शान्ति दिनेछ।....
आज यी राशी भएकाको उच्च सफलता मिल्ने ,चालेका कदमको गर्नुस सुरुवात
मेष: तपाईको मनोकामना यो सोमबार पूरा हुन सक्छ। साथै, व्यापारिक सन्दर्भमा महत्वाकांक्षी योजनाहरू सुरु गर्न सकिन्छ। उच्च शिक्षा वा रोजगारीका लागि विदेश जान चाहनुहुन्छ भने निराश हुनुहुँदैन....
आज यी राशी भएकाको भाग्यमा आउदै ठूलो फेरबदल तपाईंको के होला ?
मेष: आइतबार मन प्रसन्न रहनेछ। परिवारसँग राम्रो समय बित्नेछ, यात्राको मजा लिनेछ। व्यापार व्यवसायमा राम्रो लाभ हुनेछ । दिनको सुरुवात तपाईको लागि राम्रो रहनेछ। हातमा लिएको काममा सफलता मिल्नेछ....
तपाईंको आजको दिन यसरी बित्दैछ,हेर्नुस् राशीफल
मेष: यो शनिबार तपाईको दिन उत्तम रहनेछ। काममा आफ्नो प्रतिभा देखाउने मौका मिल्नेछ । आम्दानी बढाउने केही राम्रा अवसरहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ। सामाजिक क्षेत्रमा नेटवर्किङ लाभदायक साबित हुनेछ। परिवारमा....
आज यी राशी भएकाको भाग्य चम्कदै
मेष: यो शुक्रबार तपाईको व्यवहार अत्यन्त नम्र रहनेछ, व्यवहारमा परिवर्तन अरुको लागि चर्चाको विषय बन्नेछ। साथै, आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा लापरवाह नगर्नुहोस्। काममा लगनशील भई काम गर्नुहुनेछ र....
तपाईंको आजको दिन यसरी बित्दै छ,हेर्नुस् राशिफल
मेष: यो बिहीबार तपाईले आफ्नो व्यापार र अन्य उद्यमबाट लाभ र लाभ प्राप्त गर्न जारी राख्नुहुनेछ। मातहतका कर्मचारीको सहयोग प्राप्त हुनेछ । साथै साझेदारी....
तपाईंको आजको भाग्य कस्तो छ? थाहा पाउन हेर्नुस् राशिफल
मेष: यस बुधबार केही शुभ समाचार प्राप्त हुने सम्भावना छ। आफ्नो सृजनात्मकताले मानिसहरुको ध्यान आफ्नोतर्फ आकर्षित गर्नुहुनेछ। बुधवार पहिले आवश्यक काम गर्नुहोस्, सफलता मिल्नेछ। वास्तविकतालाई ध्यानमा राखी आर्थिक....
मेष: आज मंगलबार तपाईको मन प्रसन्न रहनेछ। आफ्नो कार्य सावधानीपूर्वक गरेर लक्ष्यको नजिक पुग्न सकिनेछ। सरकारबाट केही ठुलो लाभ लिन सकिनेछ । यसका साथै व्यापारमा आर्थिक उन्नतिको....
आज यी राशिको भाग्यमा आउदै छ यति ठूलो परिवर्तन
मेष: भाग्यले साथ दिनेछ। परिवारको तर्फबाट खुशीको स्थिति रहनेछ। यस्तो कुनै पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ, जसले आफ्नो परिवारको नाम रोशन गर्नेछ। रोकिएको पैसा फिर्ता हुनेछ र पैसा लगानी....
मेष: मेष राशिका लागि आइतबारको दिन शुभ रहने छ र फल प्राप्तिको सम्भावना पनि छ । सकारात्मक सोच राख्नुहुनेछ। तपाईं आफ्नो संचार कौशल मानिसहरूलाई प्रभावित गर्न प्रयोग....
२०२२ को पहिलो दिन यी राशिहरुका लागि निकै सुखद हुने योग
मेष: वर्षको पहिलो दिन तपाईको कार्यक्षेत्रमा लाभदायी साबित हुनेछ। सबैसँग मिठो व्यवहार हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा लाभदायक स्थिति रहनेछ। जनताबाट सम्मान पनि मिल्नेछ । काममा उच्च अधिकारीबाट प्रशंसा पनि मिल्नेछ....
आज २०२१को अन्तिम दिन कसरी बित्ला हेर्नुस् राशिफल
मेष: यो शुक्रबार तपाईको लोकप्रियता चरम बिन्दुमा हुनेछ र तपाईले अरुलाई धेरै प्रभाव पार्नुहुनेछ। अधिकारीहरूसँग विवादबाट जोगिनु भयो भने व्यावसायिक क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गर्न सकिनेछ। तपाईंका....
तपाईंको आजको दिन कसरी बित्ला? थाहा पाउन हेर्नुस् राशिफल
मेष: आजको बिहीबारको दिन राम्रो रहनेछ। धेरै साना लगानी भविष्यको लागि लाभदायक हुन सक्छ। साझेदारी व्यवसायमा कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय नगर्नुहोस्। महिलाहरु घरायसी काममा बढी व्यस्त रहनेछन् । घरपरिवारबाट शुभ....